Goorma Ayey Bilaabmi Doonaan Horyaallada Waaweyn Ee Yurub – Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A & Ligue 1? – Laacibnet.net
Goorma Ayey Bilaabmi Doonaan Horyaallada Waaweyn Ee Yurub – Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A & Ligue 1?
July 29, 2020 Abdiwahab Ahmed
Kaddib saddex bilood oo ay ciyaaraha Yurub albaabadu u laabnaayeen, loona joojiyey caabuqa Korona waxay hadda soo dhamaaday intoodii badnayd iyadoo kaliya la sugayo horyaalka Talyaaniga ee Ligue 1 oo toddobaad kaddib dhamaan doona iyo Champions League oo bisha August lasoo gabogabayn doono.
Horyaalka Jarmalka ee Bundesliga ayaa noqday midkii loogu hor bilaabay uguna hor dhamaaday, waxaana ku xigay LaLiga oo usbuuc ka horreeyey Premier League, Talyaaniga oo dhamaadka sii cago-cagaynaya iyo Ligue 1 oo gebi ahaantiiba la kanslay markii ay dawladda Faransiisku soo saartay go’aamo adag oo ay kula tacaalaysay caabuqa.
Xili ciyaareedka dib u dhacay, wuxuu saamayn ku yeeshay bilowga xili ciyaareedka dambe ee 2020/21 iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoyga oo labaduba dib isku riixay, waxaanay waddamada qaarkood si rasmi ah u shaaciyeen waqtiga fasal ciyaareedka dambe.
Horyaalka kubadda cagta Ingiriiska ee xili ciyaareedka dambe, waxa uu bilaabmi doonaa 12 September oo ah bil kaddib waqtigii uu caadiyan bilaabmi jiray. Kooxaha Ingiriiska ee ka qayb=gelaya tartamada Yurub ayaa rajaynaya inay sii dagaallamaan oo ay illaa bisha August halgan ku jiraan, isla markaana raadiyaan guulaha koobabka si ay dhaqaalihii ka lumay qayb ka mid ah uga soo kabaan.
Kooxaha Manchester City, Manchester United iyo Wolverhampton Wanders ayaa ciyaarahooda ugu horreeya ee Premier League yeelan doona toban maalmood kaddib waqtiga xilliga loo qorsheeyey in horyaalku bilaabmo.
Horyaalka Spain waxa loo qorsheeyey inuu bilaabmo isla maalinta Premier League uu bilaabmayo oo ah 12 September. LaLiga oo lasoo afjaray 23 May 2021, waxa uu dib uga dhici doonaa xilligii uu caadiyan bilaabmi jiray.
Horyaalka Bundesliga waxay kooxuhu helayaan laba bilood iyo badh fasax ah oo ah inta u dhaxaysa dhamaadka xili ciyaareedka hore iyo bilowga midka dambe oo loo qorsheeyey 18 September.
Bishii April ayay dawladdu soo rogtay go’aamo lagu mamnuucayo in ciyaaro dalkaas ka dhacaan illaa bisha September, taas oo keentay in xili ciyaareedka la kansalo, laakiin fudaydin ayaa muddooyinkan dambe timid, waxaana la filayaa in xili ciyaareedka 2020/21 uu bilaabmo 22 August.
Ma jiro waqti rasmi ah oo la shaaciyey inuu bilaabmi doono horyaalka xili ciyaareedka dambe, sababtoo ah, waxa wali socda midkii hore, waxaase la filayaa in waqtiga ugu dambeeya ee uu bilaabmi karaa ay noqoto 12 September.